ပြည်ထဲရေးက Wall ဆောက်လုပ်ရေး | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan - wallpro.com.tw
ကျနော်တို့ကအမြဲသည့်အချိန်တွင်မဆိုစျေးကွက်နှင့်ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကအတိုင်းငါတို့မဟာဗျူဟာပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး ပြည်ထဲရေးက Wall ဆောက်လုပ်ရေး အဖြစ် prompt ကိုနှင့်ကျေနပ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စျေးကွက်နှင့်ဖောက်သည်များ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အညီ Taiwan , ဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာခံတန်ဖိုးကိုဗဟိုပြုနှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးပေါ်စျေးကွက်-oriented ကြုံးဝငျပတျသကျရာ။
ထိုင်ဝမ်ငလျင်ဇုန်များတွင်တည်ရှိသောကြောင့်,အိမ်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအက်ကြောင်းနှင့်အက်ကြောင်းမှကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ပါသည်.မြို့ရိုးအပိုက်နဲ့မြို့ရိုးကိုဖွဲ့စည်းပုံရေယိုစိမ့်နဲ့ရေ seepage မှကျရောက်နေတဲ့များမှာ.ရေအက်ကွဲဝင်သောနှင့်ဘိလပ်မြေအချိန်ကြာမြင့်စွာဓာတုသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်,မြို့ရိုးအမျက်နှာပြင်ဖောရောင်ဖြစ်စေတဲ့နှင့်အမှုန့်.morphing နှင့် spalling ၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းဟုခေါ်သည်&quote;မြို့ရိုးကိုကင်ဆာ.&quote;
မြို့ရိုးအပထမဦးဆုံးရေယိုစိမ့်များ၏အကြောင်းရင်းရေယိုစိမ့်သို့မဟုတ်အခြေခံအဆောက်အဦးလောင်သောအသံကြောင်းကိုနားလည်ရမယ်.ပထမဦးဆုံးရေယိုစိမ့်များ၏အကြောင်းရင်းပိတ်ဆို့ဖို့လိုအပ်သောကြောင့်.အဆိုပါအက်မြို့ရိုးကိုရေဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်-အထောက်အထားနှင့်ရေစိုခံ,နှင့်ပြဿနာဧရိယာမြို့ရိုးကိုရေစိုခံပစ္စည်းဆောက်လုပ်ဖို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ layer အားဖယ်ရှားရမည်.soiling ၏လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်နေတာ,ကြိတ်နှင့်နိန်မြို့ရိုးအမျက်နှာပြင်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရန်ညီမျှသည်.အောက်ခြေအလွှာပြန်လည်တည်ထောင်ရေစိုခံဖြစ်ရမည်,ထိထိရောက်ရောက်အနာဂတ်တွင်ဖြစ်ပေါ်ရာမှမြို့ရိုးကိုကင်ဆာတားဆီးနိုင်ရန်အတွက်.ဒါဟာဆန့်ကျင်ရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုသည်-မှိုနှင့်ဆန့်ကျင်-အဆိုပါဆေးသုတ်အပေါ်ဘက်တီးရီးယားဆေးသုတ်,ဒါပေမယ့်ယိုစိမ့်ရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုကောင်းစွာမကိုင်တွယ်လျှင်,အချိန်ကာလတစ်ခုအထိအပြီးပြန်ဖြစ်များ၏အခွင့်အလမ်းမြင့်မားသည်.
ဒါဟာအကြီးအကျယ်အသုံးနဲ့မြို့ရိုးကိုကြောင်းကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဘာလဲ-နေအိမ်အလှဆင် built-in ရေစိုခံအင်္ကျီကိုတပ်ဆင်ထား.မြို့ရိုးအရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်း၏အရည်အသွေးတိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်သူများ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏အနှစျသိမျ့အဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်သည်,ဒါကြောင့်တစ်ဦးအရည်အသွေးကောင်းအတွင်းပိုင်းမြို့ရိုးကိုရေစိုခံအပေါ်ယံပိုင်းရွေးချယ်ဖို့အလွန်အရေးပါသည်.
သူတို့ရဲ့ DIY တူသောလူအတော်များများ,နှင့်ပုံမှန်ကျန်းမာသောမြို့ရိုး repainting သင်တန်းမရှိပြဿနာဖြစ်ပါသည်,ဒါပေမယ့်ပြဿနာသည်မြို့ရိုးရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး!အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်မြို့ရိုးကိုကင်ဆာကုသမှုပစ္စည်းများ၏တစ်ဦးကအများကြီး,နေရာဒေသများအတွက်သာ,ဆန့်ကျင်သုံးစွဲဖို့သငျသညျဆုံးမဩဝါဒပေး-ကင်ဆာသန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်,ယာယီမြို့ရိုးအကင်ဆာဖြစ်ပေါ်ဆက်လက်တားစီးနိုင်ပါတယ်,ဒါပေမယ့်အမြစ်အကြောင်းမရှိဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိပါ,ထပ်မဖြစ်အောင်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထိရောက်စွာတိုက်ဖျက်မဟုတ်ပါ,နှင့်အထွေထွေဖောက်သည်ကြီးမားသော tools တွေကင်းမဲ့(ထိုကဲ့သို့သောကိုက်အဖြစ်)မြို့ရိုးအစက်),အဆိုပါအမှုန့်တည်ဆောက်ပုံအလွှာအပေါ်ပန်းချီညီမျှသည့်ဖြစ်ပါသည်,နောက်တဖန်ပယ်ကျကြရန်လွယ်ကူသည်.
Chenglin ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသင်ကိုယ်တိုင်ပန်းချီ၏ဒုက္ခကိုကယ်တင်ရန်ခွင့်ပြုသည်သို့မဟုတ်အလုပ်ရှာနေ,နှင့်လွဲချော်ရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းပိုပြီးသေးငယ်တဲ့အသေးစိတျဂရုစိုကျ,အိမ်ရှင်တိုင်းတစ်ပြားအပေါ်ငွေအများကြီးသုံးစွဲကြောင်းသေချာစေရန်သကဲ့သို့.Chenglin's ကိုဆန်းသစ်ဆောက်လုပ်ရေးနေ့စဉ်စံဆောက်လုပ်ရေးနည်းလမ်းချမှတ်,အလုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုတိကျခိုင်မာစွာဖြစ်ပါသည်,ကာကွယ်ရုပ်ရှင်ဖုန်မှုန့်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့ပရိဘောဂကာကွယ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုသည်,ဒီလိုစက်ပက်ဖြန်းအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုံးစက်ကိရိယာများဆောက်လုပ်ရေးထိရောက်မှုနှင့်ဆေးသုတ်မျက်နှာပြင်၏ Fine တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းဆူညံသံလျော့ချပေးဖို့အလုပ်နည်းလမ်းနှင့်အညီအသုံးပြုသည်.ကိုလက်စသတ်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပရိဘောဂ Homing စနစ်,အချိန်ပြီးသွားပြီးနောက်ပိုပြီးသိသိသာသာငွေစု,ထိုအုတ်ရိုးပြောင်းလဲမှုအရောင်ကိုကူညီလွယ်ကူသော,အိမ်အသစ်တခုကိုကြည့်ကြကုန်အံ့.
ပြည်ထဲရေးမြို့ရိုးကိုအလှတရားရေစိုခံ SOP ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်
မြို့ရိုးကိုအားဖြည့်->ရေစိုခံကုသမှု->ချုပ်ရိုးအက်ကွဲခုခံ->ချောချောမောမောအောက်ဆုံး-ကြိုးဆွဲချအသားတင်အက်ကွဲ->Underlayer-မြို့ရိုးကို finish ကို->primer->multi-အလွှာအလှဆင် finish ကို
တကယ်တော့,အဆိုပါ&quote;အသစ်က&quote;အသစ်ကနေအိမ်များသို့မဟုတ်အသစ်ပရိဘောဂ၏အရသာ Formaldehyde နှင့်မတည်ငြိမ်သောအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများ၏အနံ့ဖြစ်ပါသည်.
&နွားလား;ပြည်တွင်းလေ့လာမှုများ Formaldehyde အထိ3ဖြန့်ချိနိုင်ညွှန်ပြ-15 နှစ်
&နွားလား;ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တစ်ဦးသည်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည်အဖြစ် Formaldehyde classifies
မိုးလုံလေလုံ Formaldehyde အကြောင်းအရာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့လူ့အဆင်မပြေ: ဒါဟာသင်တစ်ဦးအလှပြင်ဆင်ရေးနှင့်ပန်းချီအစီအစဉ်ရှိပါကကြောင်းအကြံပြုသည်,သငျသညျအကောငျ့သို့သင့်မိသားစုများ၏ကျန်းမာရေးကိုယူရမယ်.
အောက်ပါ Chenglin ၏လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်'s ကိုဆန်းသစ်အတွင်းပိုင်းမြို့ရိုးကိုအလှတရားကုသမှု.ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီနေအိမ်၏ beautification နှင့်တစ်ဦးချင်းစီနေအိမ်များ၏ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်.
မြို့ရိုးကိုအားဖြည့်->ရေစိုခံကုသမှု->ချုပ်ရိုးအက်ကွဲခုခံ->ချောချောမောမောအောက်ဆုံး-ကြိုးဆွဲချအသားတင်အက်ကွဲ->Underlayer-မြို့ရိုးကို finish ကို->primer->ပေါင်းစုံ-အလွှာအလှဆင် finish ကို
က Wall efflorescence
မြို့ရိုးကိုဆေးသုတ်&quote;လူသတ်သမားသည်မြို့ရိုးဟာကင်ဆာ&quote;,ထိုအုတ်ရိုးအိမ်အလှဆင်၏အကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်,တစ်ဦးကောင်းအတွင်းပိုင်းမြို့ရိုးကိုဆေးသုတ်ကိုရှေးခယျြဖို့အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.နိပွန်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး Paint,အဘယ်သူမျှမအနံ့လည်းမရှိ,အဘယ်သူမျှမပြဿနာမှုန်ရေမွှားပြီးနောက်လုံးဝလည်းမရှိ.သို့သော်ဤကိစ်စတှငျ,နိပွန် Paint'ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာကြောင့်အနာလျှင်မြို့ရိုးကိုဆေးသုတ်၏ရွေးချယ်မှုအဓိကအားကြည့်ဖို့ကပြောသည် s,အယ်လကာလီ,အနိမ့် VOC.ဒါ-ခေါ်တော်မူ VOC တရုတ်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်&quote;volatile organic compounds&quote;,နေအိမ်အလှဆင်ညစ်ညမ်းမှုများမမြင်ရတဲ့လူသတ်သမားရာဖြစ်ပါသည်.ဒါဟာအတွင်းပိုင်းမြို့ရိုးကိုဆေးသုတ်၏ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းအမြောက်အမြားအတွက်ဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ်.ပင်လေဝင်လေထွက်ပြီးနောက်,အနံ့မတည်ရှိပါဘူး,သို့သော်တဖြည်းဖြည်းနောက်ပိုင်းတွင်ဖွနျ့ပါမညျ.ထိုအထူးထူးအပြားပြား VOCs နှင့်၎င်းတို့၏ interaction က၏အရောအနှောထိခိုက်ပျက်စီးမှုပြင်းထန်မှုတိုးမြှင့်.ထိုကွောငျ့,အိမ်သူအိမ်သားအလှဆင်ပြီးနောက်,မိုးလုံလေလုံလေကြောင်းစမ်းသပ်ခြင်းမိုးလုံလေလုံလေထုညစ်ညမ်းမှုများအမှန်တကယ်အခွအေနေဆုံးဖြတ်ရန်ကောက်ယူရပါမည်.
Chenglin ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဂျပန်ချမှတ်'နိပွန်မူပိုင်ခွင့်အပေါ်ယံပိုင်း့,သီးသန့်ကြာရွက်မဟုတ်တဲ့အသုံးပြု-အစွန်းအထင်းနည်းပညာ(Lotus ဆန့်ကျင်-အညစျအကွေး)အလွန်အမင်းရေရုပ်ရှင်စေရန်-တွန်းလှန်သော.ရေသို့မဟုတ်အစွန်းအထင်းဆေးရုပ်ရှင်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနေဖို့လိုက်တဲ့အခါ,ရေမျက်ရည်စက်လေးတွေဖွဲ့စည်းစေမည်.ကြာရွက်ပေါ်နှင်းလိုပဲ,ဒါကြောင့်မြို့ရိုးအသို့ထိုးဖောက်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်.styrene ၏အသစ်အမျိုးအစား-acrylic emulsion လည်းအသုံးပြုပါသည်,နှင့်အစိတ်အပိုင်းများ၏အမှုန်အချင်းအသေးစိတ်ဖြစ်ပါသည်.ရုပ်ရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်,အဆိုပါအမှုန့်ရဲ့အပေါ်ယံပိုင်းပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးပြည့်စုံဖြစ်ပါသည်,နှင့်ရုပ်ရှင်ဒဏ်ငွေများနှင့်ချောမွေ့ဖြစ်ပါသည်,နှင့်အစွန်းအထင်းကိုထိုးဖောက်နှင့်ထိုးဖောက်ရန်ခက်ခဲသည်.ဆန့်ကျင်အလေးပေးသောအခြားထုတ်ကုန်များအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသော-fouling စွမ်းဆောင်ရည်ကို,VAE သို့မဟုတ်ရှာလကာရည်၏အသုံးပြုမှု-acrylic စနစ်က,အဆိုပါ styrene-acrylic emulsion သည့်အစွန်းအထင်းများခုခံကာကွယ်အာဏာနှင့်သန့်ရှင်းရေးအာဏာကိုတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်.ထို့အပြင်,အဆင့်မြင့်ဆန့်ကျင်၏အသုံးပြုမှု-နည်းပညာ fouling ဆေးရုပ်ရှင်မြဲမြံစေနိုင်ပါတယ်,အဆိုပါအစွန်းအထင်းသတိထားနှင့်လိုက်နာဖြစ်ဖို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်နိုင်အောင်,ထိုသို့အလွယ်တကူမြို့ရိုးအတောက်ပစောင့်ရှောက်ဖို့ scrubbed နှင့်အသစ်ရနိုင်.
ထုတ်ကုန်အဘက်ဘက်မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖောက်သည်တစ်ဦးအရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ကွိုးစားနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်အာမခံခြင်း, အသစ်နှင့်အဟောင်းဖောက်သည်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်ကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးအသေးစိတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်ဘယ်တော့မှပေးပါ။